घरेलु उपाय बाट रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउनुहाेस् र स्वस्थ्य शरीर राख्नुहाेस् - ज्ञानविज्ञान
घरेलु उपाय बाट रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउनुहाेस् र स्वस्थ्य शरीर राख्नुहाेस्
5 months ago biplov
रुघाखोकी, ज्वरो लगायत विभिन्न रोगहरुको संक्रमणदर उच्च हुन्छ । कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली भएका व्यक्तिहरुमा यस्ता रोगको संक्रमण छिटै हुने गर्छ । त्यसैले, यस्ता रोगको संक्रमण नहोस् भन्नाका लागि सबैभन्दा पहिलो शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई मजबुत बनाउन जरुरी छ । र, शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई मजबुत बनाउन खासै कठिन पनि छैन । यस्ता खानेकुराको नियमित सेवनले मात्र पनि शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई मजबुत बनाउन सकिन्छ ।
चोकर सहितको अन्न
गहुँ, ज्वार, बाजरा, मकै जस्ता अन्न स्वास्थ्यका लागि राम्रो मानिन्छ । किनकी यसमा चोक्करको मात्रा धेरै हुन्छ । चोक्कर सहितको अन्नको सेवनले कब्जियत हुँदैन । साथै, शरीरको प्रतिरोधी क्षमता मजबुत हुन्छ । जसले गर्दा जस्तो सकुै प्रतिकुल मौसममा पनि रोगको संक्रमण हुनबाट जोगिन सकिन्छ ।
पानीलाई प्रकृतिक औषधी पनि भनिन्छ । पर्याप्त मात्रामा पानीको सेवनले शरीरमा जम्मा भएको कयौ प्रकारको विषाक्तलाई बाहिर निकाल्न सकिन्छ । र, प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन सकिन्छ । पानीको सेवन गर्दा सकेसम्म तातो वा मनतातो पानीको सेवन गर्नुपर्छ ।र, फ्रिजकाे पानी खानबाट बच्नुपर्छ ।
तुलसीको आफ्नै धार्मिक महत्व छ । त्यसबाहेक, तुलसीमा विभिन्न किसिमको औषधीय गुण पनि छ । यसमा पर्याप्त मात्रामा एन्टीबायोटिक गुण रहेको हुन्छ ।
जसले दुखाई कम गर्न, शरीरको प्रतिरोधी क्षमता मजबुत बनाउन सहायता प्रदान गर्छ । र, तुलसीका यी गुण प्राप्त गर्नका लागि प्रत्येक तीन देखि पाँच वटा पत्ता तुलसीको सेवन गर्नु पर्छ । यसलाई पानीमा हालेर तथा चियाको रुपमा पनि सेवन गर्न सकिन्छ भने काँचै पनि खान सकिन्छ ।
योग तथा प्राणायामले शरीरलाई रोग मुक्त राख्न तथा स्वस्थ राख्न महत्वपूर्ण भूमिका निभाउने गर्छ । कुनै जानकार व्यक्तिबाट घरमै बसेर पनि योग अभ्यास गर्न सकिन्छ र यसको लाभ लिन सकिन्छ । जसले गर्दा शरीरको प्रतिरोधी क्षमता मजबुत हुने गर्छ ।
हाँस्नु पनि औषधी
हास्नुलाई हामी व्यंगको रुपमा लिन्छौ । जबकी हास्नाले शरीरको रक्तसञ्चार सुचारु हुने गर्छ । शरीरले अत्याधिक मात्रामा अक्सिजन ग्रहण गर्छ । तनावमुक्त भएर हासेरमा शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन समेत मद्दत मिल्छ ।
सुन्तला, मौसम लगायतका फलफूलमा भिटामिन ‘सी’ पाइनुका साथै पर्याप्त मात्रामा खनिज तत्व पाइन्छ । यस्ता खनीज पदार्थले शरीरको प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । फलफूललाई जूस वा फलको रुपमा जसरी पनि खान सकिन्छ । तर त्यसमा नुन भने मिसाउनु हुँदैन ।
केराउ, चना, मुंग, मेथी लगायतका गेडागुडी अंकुरित अन्नमा पर्दछ । यस्ता अन्नलाई रातभर पानीमा भिजाएर खाएमा यसले शरीरलाई स्वस्थ राख्छ । विशेषगरी यस्ता अन्नलाई उमार्नाले यसमा रहेको पोषक तत्वको क्षमता अझै बढ्ने गर्छ । साथै, यो पचाउनमा सजिलो हुनुका साथै खानमा स्वादिलो र पोषणयुक्त पनि हुन्छ ।
सलाद भन्नासाथ हाम्रो सामु काँक्रो ,गाँजर, टमाटर, मुला, प्याज ,चुकंदर आउने गर्दछ । यस्ता सलाद खानामा धेरै भन्दा धेरै प्रयोग गर्नु पर्दछ । अझ सकिन्छ भने थालको एक भाग सलादले नै भर्नुपर्छ । किनकी सलादले खानालाई सही तरीकाले पचाउनमा मद्दत गर्छ । साथै, यसमा रहेको पोषक तत्वले शरीरको प्रतिरोधी क्षमता बढाउँछ ।
हामीले केहि सम्बन्धित थप जानकारी दिइएका छाै
मेवाको बिउ सेवन गर्नुहोस्, यी खतरनाक रोगहरुबाट छुटकारा पाउनुहाेस् !
मेवा एक स्वादिष्ट तथा पोषणले भरिपूर्ण फल हो भन्ने कुरामा कसैको पनि दुई मत हुनसक्तैन । तर मेवा भित्र हुने यसका बिउहरु अझै लाभदायक तथा स्वास्थ्यबद्र्धक हुन्छ भन्ने कुराको जानकारी हामीहरुमध्ये थोरैलाई मात्र हुनसक्छ । आज डिसीनेपाल तपाईंहरुलाई मेवाको बिउ सेवन गर्नाले हुनसक्ने फाईदाहरुका बारेमा जानकारी गराउँदै छ ।
मेवाको बिउ सेवन गर्नाले हुने फाइदाहरु
१. कलेजो सम्बन्धी रोगमा
मेवाको बिउमा उपलब्ध पोषण तत्वले कलेजोमा लागेको सिरोसिस भन्ने रोगबाट सहजै छुटकारा दिलाउँछ । सिरोसिस भन्ने रोग अत्यधिक रक्सि सेवन बाट हुन्छ । मेवाको ५-६ वटा सुकेको बिउ लिनुहोस् र यसलाई सिलौटोमा पिन्नुहोस् ।
अव यो धुलोलाई कागतीको रस सहितको एक ग्लास पानी वा जुसमा मिसाएर दैनिक एक महिना सम्म सेवन गर्नुहोस् । सिरोसिस रोग आपसेआप निको भएर जान्छ । मेवाको बिउ सेवन गर्नाले कलेजो बलियो हुनुका साथै कलेजोमा कुनै पनि प्रकारको संक्रमण हुनपाउँदैन ।
२. किटाणु नासक
मेवाको बिउ सेवन गर्नाले शरीरमा संक्रमण हुन पाउँदैन र यसले फुड प्वाइजनिङ जस्तो समस्यालाई सहजै नाकाम बनाउँछ । यसको सेवन गर्नाले ज्वरो समेत लाग्न पाउँदैन ।
मेवाको बिउ सेवन गर्नाले शरीरमा कयान्सरको कोशिका र ट्यूमर बिकसित हुनपाउँदैन । मेवाको बिउमा प्राप्त गुणले कोलन, स्तन, फोक्सो, ल्युकेमिया र प्रोस्टेट क्यान्सर रोगहरुको बिरुद्धमा काम गर्छ ।
४. फर्टिलिटी (प्रजनन)
अनुसन्धानले के देखाएको छ भने मेवाको बिउ सेवन गर्नाले शरीरमा कुनै पनि असर नपुर्याई सुक्रकिट उत्पादन नियमित हुन्छ । आयुर्वेद तथा घरेलु उपचार सम्बन्धी जनकारी भएका महिलाहरु प्रिगनेन्सी रक्षाका लागि मेवाको बिउ सेवन गर्छन् । अनुसन्धानले समेत देखाई सकेको छ मेवाको बिउ सेवन गर्नाले पुरुषको सुक्रकिट उत्पादन क्षमता नियमित हुने र महिलाको प्रिगनेन्सी रक्षामा लाभदायक हुने तथ्य ।
५. शरीर सुनिएको निको हुन्छ
आर्थराइटीस, जोर्नी सम्बन्धी रोगहरु, शरीर सुनिएको, शरीर दर्द तथा छालामा हुने रातोपना जस्ता समस्याहरु मेवाको बिउ सेवन गर्नाले सञ्चो हुन्छ ।
६. किड्नी सम्बन्धी समस्याहरु
पाकिस्तानको कराँची विश्वविध्यालमा गरिएको एक अनुसन्धान अनुसार मेवाको बिउ प्रयोग गर्नाले किड्नी जन्य रोगहरु सहजै निको भएको देखियो । पाकिस्तान लगायतका एसियाका कतिपय ठाउँमा पाकेको मेवालाई उत्तम फलको रुपमा प्रयोग गरिन्छ । अनि मेवाको बिउलाई पनि उत्तिकै पौष्टिक आहारको रुपमा प्रयोग गरिन्छ । तपाईं पनि मेवा तथा मेवाको बिउ प्रयोग गरेर स्वस्थ जीवन व्यतित गर्नुहोस् भन्ने हाम्रो कामना ।
यस्ता छन्, मेवा खानुका फाइदा
मेवामा भिटमनि ए पाइन्छ । गर्मी मौसममा मेवाको सेवन अमृत समान हुन्छ । यसले विभिन्न रोग संग लड्ने क्षमाता प्रधान गर्छ । यस्ता छन् मेवा सेवनबाट हुने फाईदाहरु
१. मेवाको नियमित सेवनले कलेजोलाई स्वस्थ राख्नुका साथै छालालाई पनि सुन्दर तथा स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ ।
२. मेवाको बियाँमा जिवाणु प्रतिरोधी गुण हुन्छ । मेवाको बियाँ पिँधेर घाउमा लगाउँदा घाउमा थप संक्रमण हुन दिदैन र घाउ छिटै निको हुन्छ ।
३. मेवामा प्रशस्त मात्रामा भिटामिन ए पाइने भएकोले यसको नियमित सेवनले आँखा तेजिलो बनाउँछ । साथै यसले रगतलाई सफा पनि बनाउँछ ।
४. जन्डिसका बिरामीले मेवाको नियमित सेवन गर्नाले फाइदाजनक हुका साथै यसले कलेजोलाई क्रियाशील बनाउन मद्दत पनि गर्छ ।
५. मेवा बजारमा सहज रुपमा पाइने र गाउँघरमा पनि सहजै फलाउन सकिने सस्तो फल पनि हो । मेवामा भिटामिन बी पनि पर्याप्त पाइन्छ ।
६. यसले शरीरमा फोलिक एसिड, तथा भिटामिन बी का विभिन्न रुपहरुको सरीरमा कमी हुन दिँदैन ।
७. यसमा पर्याप्त फाइबर पाइने भएकाले कब्जियत तथा अन्य पाचन प्रक्रिया सम्बन्धि समस्या समाधान गर्न मद्दत गर्छ ।
८. मेवाको नियमित सेवनले शरीरमा रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ ।
औषधिय गुडयुक्त्त मेवाले के के रोग निको पर्छा ?
मेवा क्यारिकेसी परिवारमा पर्ने एक प्रकारको फल हो । अन्य फलफूलको तुलनामा मेवा निकै स्वस्थ फल मानिन्छ । यो फल पेट तथा मुटु दुबैको लागि निकै लाभदायी हुन्छ। यो बजारमा सहज रुपमा पाइने र गाउँघरमा पनि सहजै फलाउन सकिने सस्तो फल पनि होे । मेवा देख्न र खानमा जति मीठो हुन्छ यो त्यत्तिकै गुणकारी पनि हुन्छ।
१. दाद आएमा
काँचो मेवाको टुक्रा काटेर दादमा नियमित लगाउने गरे दाद आएको ठिक हुन्छ । तर बासी मेवा भने प्रयोग गर्नु हुँदैन ।
२. जिब्रो फुटेमा
काँचो मेवाको दूधमा गिलसिरिन मिसाएर जिब्रोमा विहान/वेलुका दल्ने गरे केही दिनमा ठिक हुन्छ ।
३. अल्काई भएमा
काँचो मेवा ताछेर नियमित दिनमा ४/५ टुक्रा सेवन गर्ने गरेमा अल्काई बढ्न पाउँदैन र निको हुँदै जान्छ ।
४. डंडीफोर र चाँया भएमा
काँचो मेवाको टुक्रा नियमित बेलुका अनुहारमा केही समय दलेर मुख धुने गरेमा डंडीफोर र चाँया निको हुँदै जान्छ ।
५. घाँटीभित्रबाट सुनिएमा
काँचो मेवाको टुक्रा पकाएर पानीले गारगल गरेमा २/३ दिनमा ठिक हुन्छ ।
अधिक मात्रामा फाइबर पाइने भएकाले यसले रगतको कोलस्टेरोल मात्रा घटाउछ । यसमा भएको इन्जाइमले कोलस्टेरोलको अक्सिडाइजेसनबाट रोक्छ, जसबाट हृदयाघात हुने सम्भावना कम हुन्छ ।
मेवामा भएको एन्टिअक्सिडेन्टले उमेर अगावै छाला चाउरी पर्ने समस्याबाट मुक्ति मिल्छ। यसले मानिसलाई युवा बनाइराख्छ ।
८. पेटको समस्यामा
मेवाको बियाँ पेटको रोगका लागि औषधिको रुपमा प्रयोग हुन्छ । यसले पेटका जुका तथा परजीवीलाई मार्छ ।
मेवा कन्स्टिपेसनका लागि अचूक औषधि हो । यसले खानालाई प्राकृतिक रुपमा पचाउन मद्दत गर्छ ।
१०. मलद्वारसंबन्धी समस्यामा
मेवाको जुस मलद्वारको संक्रमण हटाउन काम लाग्छ । तर, उपचारका लागि यसको नियमित प्रयोग गर्नुपर्छ ।
११. तौल घटाउन
उच्च पोषण र न्युन क्यालोरी हुने भएकाले तौल घटाउन चाहनेका लागि मेवा निकै लाभदायी मानिन्छ ।
१२. बिहानीको वाकवाकीमा
खासगरी गर्भवती महिलामा बिहानपख देखिने वाकवाकीको समस्यामा यो काम लाग्छ। बिहान एउटा सानो टुक्रा मेवा खानाले वाकवाकी र अरूची हट्छ।
जलनशिलविरुद्धका इन्जाइम हुने भएकाले यसले दुखाई कम गर्न मद्दत पुर्याउछ, खासगरी आर्थराइटिस, ओस्टियोपोरोसिस भएका बिरामीमा यो लाभदायीमानिन्छ । यसमा क्यान्सरसंग लड्ने क्षमता पनि हुन्छ ।
१४. प्रतिरोधी क्षमतावृद्धिमा
यो भिटामिन ए र भिटामिन सी को भण्डार नै हो, यसले शरीरको रोगप्रतिरोधी क्षमतामा वृद्धि गर्छ, खासगरी ज्वरो, रुघाखोकी भइरहने बिरामीलाई यो काम लाग्छ ।
१५. स्याम्पुको रुपमा
मेवाका तत्व मिसाइएको स्याम्पु चाया हटाउन निकै लाभकारी हुन्छ ।
१६. रजस्वला अनियमित भएकोमा
मेवाको नियमित सेवनले महिलाको मासिक धर्मलाई पनि नियमित बनाउछ।
१७. कलेजोको क्यान्सरमा
यसले क्यान्सरको कोषको वृद्धिमा ढिला गराउछ र कलेजोलाई बचाउछ।
भाले लंगुरमा गरिएको एक अध्ययनले मेवामा गर्भनिरोधक क्षमता पनि भएको पाइएको छ। त्यसैले पुरुषले मेवा प्रयोग गरेको अवस्थामा सहवास भएकामा तत्काल गर्भ रहने सम्भावना कम हुन्छ।
१९. मिर्गौलाको समस्यामा
विषसेवनका कारण मिर्गौला फेल भएको अवस्थामा मेवाले पुनः पूरानै अवस्थामा फर्काउन मद्दत गर्छ । यसमा भएका एन्टिअक्सिडेन्ट र अक्सिडेटिभले मिर्गौलालाई फेल हुनबाट बचाउछ ।
मेवाको पातको जुसले डेंगुको ज्वरोलाई समेत रोकथाम गर्ने छ । मेवाको पातको जुसले शरीरमा रगतको प्लेटलेटमा वृद्धि गर्छ ।
मेवा जतिकै लाभदायक मेवाको पातको जूस
मेवा खानुले हाम्रो स्वास्थ्यलाई धेरै फाइदा हुन्छ जुन कुरा हामीले यो भन्दा माथि चर्चा गरिसकेका छौ तर, मेवाको पातको जूस विरलै कसैले पिएको सुनिन्छ ।
मेवाको पातको जूस यदी तपाईले पिउनु भएको छ भने राम्रो हो र यदी पिउनु भएको छैन् भने अब पिउन थाल्नुस् । किनकी मेवा खानुको साथै मेवाको पातको जूसले धेरै प्रकारका रोगहरुबाट छुट्कारा पाउन सकिन्छ । यदी तपाई जीवनभर स्वस्थ रहन चाहनुहुन्छ भने आफ्नो नियमित डाइटमा मेवाको जूसलाई सहभागि गराउन सक्नु हुन्छ ।
१. रगतको कमीमा लाभदायक
मेवाको पातको जूस औषधि भन्दा कम हुँदैन । यदी तपाईको रगतमा प्लेटलेट्स कम हुँदैछ भने मेवाको पातको जूस पिउन सक्नु हुन्छ । मेवाको पातको जूस तपाई दैनिक दुई चम्मचा तिन महिनासम्म पिउनुभयो भने तपाईको रगतमा प्लेटलेट्सको मात्रा चाँडै नै बढेर जान्छ ।
२. इन्फेक्शनबाट बचाउँछ
शरीरको इम्यूनिटीलाई बढाउनुका साथै मेवाको पातको जूसले शरीरमा व्याक्टेरियाको उत्पादनलाई रोक्नमा पनि मद्दत गर्छ । यसले रगतमा सेतो रक्त कोषिका (व्हाईट व्लड सेल्स) र प्लेटलेट्सलाई पनि बढाउनमा मद्दत गर्छ ।
३. डेंगूको लागि रामबाण औषधि
डेंगू र मलेरिया सँग लड़नमा मेवाको पातको जूस धेरै नै लाभकारी हुन्छ । यसले ज्वरोको कारण कम हुँदै गएको प्लेटलेट्सलाई बढाउनुका साथै शरीरमा कमजोरी हुन दिदैँन ।
४. महिनावारीको समय दुखाईबाट बचाउँछ
महिनावारीको समय हुने दुखाई धेरै नै खतरनाक हुन्छ र यस अवस्थामा हुने दुखाईमा मेवाको पातको जूसमा इमली, नून र २ गिलास पानी मिसाएर काढ़ा बनाउने । त्यसपछि त्यो काढालाई सेलाएर पिउनाले दुखाईमा राहत प्राप्त हुन्छ ।
५. क्यान्सर कोषलाई बढ्न दिदैँन
मेवाको पातमा क्यान्सरसँग लड्ने गुण हुन्छ । जसले इम्यूनिटीलाई बढाउनमा मद्दत गर्छ , र सर्भाइकल क्यान्सर, स्तन क्यान्सर जस्ता क्यान्सरका कोषहरुलाई उत्पन्न हुनबाट जोगाउँछ ।
तपाईलाई यो जानकारी कस्तो लाग्यो ? हाम्रो जानकारीहरु अरुलाई पनि देखाउन कृपया सेयर गर्नुहोला ।
तपाइको एक सेयरले थाहा नभएकाहरुले ज्ञान पाउछन भने हामीलाई पनि सहयोग मिल्नेछ ।
याे भिडियाे पनि हेर्नुहाेला जानकारीकाे लागि
Don't Miss it रक्तअल्पता हुने कारण र यसबाट बच्ने उपायहरु जानिराखाैँ
Up Next योगा र ध्यान गर्नाले हाम्राे स्वास्थ्यमा यस्ताे परिवर्तन साथै क्यान्सरको जोखिम पनि कम, पढाैँ
अमृतीय गुण भएको बेलकाे यति धेरै फाइदै फाइदा
‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात्।’ यो उक्ति नेपाली समाजमा निकै प्रचलित छ। बेल पाक्दा कागलाई हर्ष होस् या बिस्मात,…
7 days ago Pradeep Karki
के तपाइलाइ लामाे कपाल मन पर्छ ? यस्ता छन् कपाल लामाे बनाउने घरेलु उपाय
कपाल लामो बनाउन जसलाई पनि मन पर्छ । हरेक युवतीहरु कपाल लामो बनाउने सौन्दर्य प्रशाधनको खोजीमा भौतारिइरहेका हुन्छन् । तर,…
3 weeks ago Pradeep Karki
के तपाइकाे अनुहार भन्दा हात कालाे छ ? यस्ता छन् अनुहार जस्तै हात पनि गाेराे बनाउने उपाय
अनुहारको सुन्दरता कायम राख्न अनेक उपाय अपनाउने कतिपय व्यक्ति हातगोडाको सुन्दरतामा खासै चासो राख्दैनन् । एकातिर अनुहारको केयर नगर्नु तथा…
हिन्दू धर्ममा पवित्र मानिने पीपलको रुखबाट हुने अनेक फाइदाहरु
शताब्दियौंदेखि मानिसहरू पीपलको रुखको पूजा गरिरहेका छन् । धर्तीमा भएका रुखमध्ये यसैले सबभन्दा बढी अक्सिजन फाल्छ । यसले चौबीसै घन्टा…
4 weeks ago biplov
के तपाइ कुइना र घुडाकाे कालाेपन हटाउन चाहानुहुन्छ ? यस्ता छन् घरेलु उपाय
बाँकी छालाको तुलनामा कुइना र घुडाको छाला बढी कडा हुन्छ, त्यसैले पनि बढी कालो हुन्छ । घुडा र कुइनाको कालोपनलाई…
4 weeks ago Pradeep Karki
सावधान ! जीवन वर्वाद बनाउछ रक्सीले, जान्नुहाेस् यसकाे बेफाइदा बारे
एक शोधका अनुसार, मदिरा पिउने बानीले कलेजका छात्रहरुलाई खराब जीवनशैलीको कुचक्रमा फसाउछ । यसले उनिहरुको पढाईका साथै मानसिक तनाव र…
खाना खादा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु
अमिलो फलको सेवन निबुवाको रस पारम्परिक रुपमा पाचनका लागि प्रयोग गरिदै आएको छ । निबुवाको गन्ध र स्वाद दुवैले अत्यधिक…
2 years ago sam dahal
कोलेस्ट्रोल यसरी कम गर्ने ,जान्नुहोस
१. दैनिक तीस मिनेट व्यायाम अनिवार्य गरौं । २. माछामा कोलेस्ट्रोल घटाउने प्रभावकारी तत्व हुन्छ । कोलेस्ट्रोल र ट्राइग्लिसराइडलाई सन्तुलन…
मानसिक तनाब र यसका रोकथामहरु
मानसिक तनावका थुप्रै कारणहरू छन्। हाम्रो जीवनलाई, हाम्रो अवस्थालाई कसरी लिन्छौ। त्यो चिजसँग हाम्रो तनाव निर्धारित हुन्छ। कुनै व्यक्तिलाई एउटा…
1 year ago sam dahal
मौरीले फूलको रस चुसेर त्यसमा अतिरिक्त पदार्थहरू मिलाई चाकामा एकत्र गर्दा बन्ने प्राकृतिक गुलियो पदार्थ हो- मह  पृथ्वीमा पाइने सबैभन्दा…
आलुको बोक्रा ताछेर खाने गर्नुहुन्छ ? बोक्रा नताछी खानुका यस्ता छन् फाईदा – जान्नुहोस्
हरेकको भान्सामा, हरेक छाक पाक्छ आलु । आलुको अनेक परिकार बन्छ । आलुलाई जसरी पनि खान सकिन्छ । उसिनेर खाए…
घरेलु उपचार, सौन्दर्य
किन आउँछ पोतो र तिलकोठी ? यसको समाधान र घरेलू उपाहरु जान्नुहोस्
पोतो र तिलकोठी आउनु भनेको प्राकृतिक छालाको विभिन्न स्थानमा फरक रङ देखा पर्नु हो । यो निम्तिनुमा छालाभित्र हुने मेलानिन…
यस्ता छन् केहि उपाय दुई हप्तामै तौल घटाउने
शरिरमा जमेको बोसोलाई ऊर्जाको लागि उपयोग गर्नु कलेजोको सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम हो तर यसले आफ्नो कार्यलाई राम्रोसँग गर्न पाउँदैन किनभने…
2 years ago biplov
जन्डिस निको पार्न अपनाउनुपर्ने घरेलु उपायहरु
आँखाको सेतो भाग, हत्केला, अनुहार वा सम्पूर्ण शरीरमा पंहेलो रंग देखिएको अवस्थालाई जन्डिस भनिन्छ । जन्डिस आँफैमा रोग होइन ।…
घर संसार (7)
घरेलु उपचार (46)
व्यक्तित्व विकास (6)
संस्कृति परम्परा (19)
सामान्य ज्ञान (54)
सूचना प्रबिधि (11)